कंगना रनावट विवाहित ? – Mero Film
कंगना रनावट विवाहित ?
पछिल्लो समय ‘गुड न्युज’ मा देखिएकी करिना कपुर अब फिल्म अंग्रेजी मिडियाम माझ दर्शक बीच देखिदै छिन् । यहि फिल्मको प्रमोसनको शिलशिलामा उनले एक गल्ति गरेकी छन् ।अविवाहित नायिकालाइ विवाहित भनेर उनी विवादमा तानिएकी हुन् । उनले कंगनालाई विवाहित भनिन्।
करिनालाई जब भारतीय विवाहित अभिनेत्रीको स्थितिको विषयमा प्रश्न सोधियो, उनले विवाहित हुनुमा कुनै समस्या नरहेको बताइन् । ‘आजकालका निर्देशक धेरै नै सपोर्ट गर्ने छन् । मलाई कविर खान र आर बाल्कीले विवाह पचात नै ब्रेक दिनु भयो । समय परिवर्तन भैरहेको छ । खास गरी विद्या बालन र कंगना रनावट लगायत कलाकारले त सिमा नै तोडेका छन् । उनीहरुले छानेको चरित्रको प्रसंसा गरेर सकिदैन ।’ यसो भनि रहदा उनले कंगना अविवाहित रहेको नै याद गरिनन् ।
यस भन्दा पहिला पनि उनले यस प्रकारको गल्ति गरेकी थिइन् । उनलाई फिल्म ‘हिरोइन’मा ऐश्वर्या फिल्मको लिड एक्टर भएको भए कस्तो हुन्थ्यो भनेर सोधिएको प्रश्नमा उनले ‘हाम्रो तुलना गर्नु राम्रो होइन हामी अलग जेनेरेसनबाट हौँ ।’ भनेकी थिइन् । जबकी ऐश्वर्या र करिनाको उमेर अन्तर जम्मा ६बर्षको छ ।
२०७६ फागुन २२ गते १२:५९ मा प्रकाशित